Lahatsoratra miaraka amin'ny mpanoratra miaraka amin'ny WordPress | Martech Zone
Lahatsoratra navoakan'ny mpiara-miasa ao amin'ny WordPress
Alakamisy, Aprily 12, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Rehefa mangataka antsika hanao zavatra somary tsy hitovizany amin'ny bilaogintsika ny tsirairay dia tsy mamaly mihitsy isika hoe "Tsy vitako izany.". Izahay dia manao fivoaran'ny WordPress an-taonina maro ary mahatalanjona anay hatrany amin'ny isan'ny fitaovana misy hamita ilay asa. Omaly, lahatsoratry ny vahiny momba ny fampiroboroboana hetsika amin'ny media sosialy… ny sticker dia ny hoe bilaogy iray mpanoratra miaraka!
Ary vitantsika izany!
Tsy mora anefa izany! Nametraka plugin lehibe antsoina hoe Mpanoratra mpiara-miasa Plus izay toa plugin amin'izao fotoana izao izay manana endrika tena mahafinaritra sy fampidirana mafy. Tsy mandeha ianao ary mandeha raha vao mihetsika ny plugin. Na aiza na aiza no tianao hisehoan'ny mpanoratra marobe amin'ny modely dia mila manova ny kaody ianao mba hifehezana ireo mpanoratra fanampiny.
Ho anay dia midika fanavaozana ny functions.php izay nanome ny mombamomba ny mpanoratra momba ny sombintsombiny momba ny pejy an-trano sy ny sokajy - ary koa ny pejin-dahatsoratra bilaogy tokana izay mampiseho fizarana mpanoratra manokana eo ambanin'ny lahatsoratra bilaogy.
Rehefa manoratra ny lahatsoratry ny mpanoratra ianao dia azonao atao ny manomboka manoratra anarana fanampiny hanampiana mpanoratra faharoa (na mihoatra). Ny fiasan'ny autocomplete dia mpamonjy aina tokoa. Manana mpanoratra voasoratra anarana manodidina ny 60 ato amin'ity bilaogy ity isika ka tsara lavitra noho ny mandamina lisitra goavambe. Azonao atao aza ny misintona sy milatsaka ny filaharan'ny mpanoratra raha tianao.
Ny hafalianay dia nipoitra ho azy teo amin'ny pejin'ny mpanoratra ihany koa ilay lahatsoratra… noho izany dia toa manararaotra kaody miverimberina tsara izay mety efa misy ao amin'ny WordPress ireo mpamorona. Nahita kaody fototra vitsivitsy ao anatin'ny WordPress aho izay mety mamela ity endri-javatra ity haorina amin'ny ho avy… fa amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny plugin. Raha mbola miahiahy momba izany ianao, ny mpanoratra ampidiro ny olona avy Automattic (Orinasa ray aman-dreny WordPress).
Manana fanilihana roa isika ao tsy miseho - ny lohahevitra finday (izay havaozinay avy eo), ny RSS feed ary ny iPhone App. Mandritra izany fotoana izany, manana ny zavatra ilaintsika rehetra isika!
Tags: Mpanoratra 2mpanoratra isaky ny lahatsoratrampiara-miasampanoratra miaraka amin'ny wordpressmpanafika wordpressmpanoratra maro ny wordpress
11 Oktobra 2014 à 7:34
Salama, mitantana bilaogy maimaim-poana WordPress.com ho an'ny klioban'ny asa fanaovan-gazety any an-tsekoly aho, ary tiako ny ho afaka hamaritra ny tena mpanoratra, tsy voatery ho ao amin'ny lohan-dohateny, amin'ny fomba manindry ny anaran'ny mpanoratra amin'ny lahatsoratra na momba ny pejy dia mety hiseho amin'ny pejin'ny mpanoratra roa ny lahatsoratra. Ny fanavaozana avy amin'ny tranokala maimaim-poana dia tsy misy fanontaniana, noho izany dia tsy afaka manao izany aho amin'ny fampiasana plugins, ary te-hanandrana ny tsy hanakorontana ny sokajy na marika aho. Raha azo atao ny manisy marika na manasokajy lahatsoratra iray nefa tsy ho hitan'ny mpamaky, dia izany no fomba mora indrindra ho ahy.
11 Okt 2014 amin'ny 5:48 PM
Kishan, tena tsy mahafantatra vahaolana ivelan'ny fitadiavana lohahevitra mety manana ireo endri-javatra tadiavinao ireo aho. Tena tsy manana traikefa amin'ny dikan-teny maimaim-poana izahay.